Qaramda Midoobay oo ku baaqday dejinta xasaradda ka aloosantay gobolka Sool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaramda Midoobay oo ku baaqday dejinta xasaradda ka aloosantay gobolka Sool
Muqdisho – Mareeg.com: Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa dareen ka muujiyay shaqaaqadda ka dhexdhalatay ciidamo ka socda Soomaliland iyo kuwo ka socda Puntland, oo ku murunsan Gobolka Waqooyi ee Sool, gaar ahaan magaaladda Taleex.
Nicholas Kay ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya gobolka Sool, gaar haan degmada Taleex iney xaaladda dejiyaan, isagoo xusay inaan xaaladda jirta lagu xallin kari qaab ciidan.
“Waxaan ku baaqayaa in la muujiyo dheganaansho, xaaladda laguma xalin karo hab ciidan, dhamaan dhinacyada ay arrintu khuseyso waa in ay muujiyaan dulqaad, kuna kicin ficil keeni karo dagaal, waana in ay sida ugu dhaqsaha badan u damiyaan buuqa jira ama u qaboojiyaan xaaladda” ayuu yiri danjire Nicholas Kay.
“Dhinacyada ishaya waa in ay ku xalliyaan arrimahoodda si ay ku dheehantahay xasilooni, nabad iyo isu tanaasulid, dadka Soomaaliyeed way soo dhibtoodeen in ku filan, waxeyna ogyihiin in wax wanaag ah aan lagu gaareeynin dagaal iyo amni la’aan” ayuu sidoo kale yiri Ergayga Qaramada Midoobay.
Ergayga Qarmada Midoobay ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ciyaari kaalin dhexdhexaadin ah si xaalladda taagan loo qaboojiyo.
“Xafiiska UNSOM iyo bulshada caalamka ayaa labaduba ku baaqaayo in la muujiyo dulqaad aad u weyn, waxaana diyaar u nahay inaan dhinacyada ka taageerno wixii dhexdhexaadin ah” ayuu yiri ugu dambeyntii yiri Nicholas Kay.
Ciidamada maamulka Somaliland oo garab ka helaya maleeshiyo deegaanka ah ayaa shalay awood kula wareegay degmada Taleex ee gobolka Sool, waxaana maamulka Puntladn iyo Khaatumo ku hanjabeen iney qaadayaan tilaado la mid ah tii Somaliland qaaday eek u qabsatay Taleex.
Gudoomiye cusub oo la wareegay maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir